Otu esi egbochi WhatsApp site na paswọọdụ | Gam akporosis
Eder Ferreño | | Huawei, Nche, Whatsapp
Ga ajụjụ ndị na-abịakwute anyị Gam akporosis Site na ozi, nkwupụta na blọọgụ ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta dị iche iche nke anyị nwere akụkọ na-arụsi ọrụ ike, taa achọrọ m ịme nkuzi a dị mfe maka ndị nwe akara ọnụahịa. Huawei na acho igbachi WhatsApp site na paswọọdụ iji kpuchido nzuzo nke ngwa ahụ dị nro nke nwere ike imebi ihe karịrị otu iwe ma ọ daba n'aka ndị na-ekwesịghị ịda.
Ọ bụ ezie na m gbakwasara nkuzi na gburugburu WhatsApp mkpọchi site na paswọọdụ Iji kpuchido nzuzo anyị pụọ n'anya na-acha ọcha, enwere ike ịme usoro a ma ọ bụ ndụmọdụ ma mechaa dakọtara maka ngwa ọ bụla na anyị arụnyere na njedebe gam akporo anyị nke ika Huawei, ma ọ bụ ngwa ngwa ma ọ bụ ngwa ebudatara.
Agbanyeghị na Playlọ Ahịa Google Play, ụlọ ahịa ngwa gam akporo anyị na-ahụ ọtụtụ ngwa n'efu na, na tiori, ga-enyere anyị aka igbachi WhatsApp site na paswọọdụ, nke kachasị dị ọcha ma dị njọ bụ na, ma ọ dịkarịa ala na njedebe Huawei-brand dị ka Huawei P8 ma ọ bụ Huawei P8 Lite, ngwa ndị a anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ maka obere sekọnd.
Na ụkpụrụ, anyị, ndị ọrụ Huawei, nke a kwesịrị inye anyị otu ihe ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị mmadụ niile maara ya, ndị ahịa nke ụdị ama ama a nke ndị China. A na-etinye ngwa zuru ezu iji jikwaa akụkụ dị iche iche nke ọnụ anyị dị ka ọkọlọtọ, nke gụnyere mkpọchi paswọọdụ WhatsApp ma ọ bụ ihe ọ bụla ngwa na anyị rụnyere na anyị gam akporo ọnụ.
Ngwa a na-ekwu okwu, nke m gosiri gị naanị n'elu usoro ndị a na nseta ihuenyo na vidiyo nkọwa zuru ezu dị n'okpuru ebe m gosipụtara gị otu esi eji ya n'ụzọ dị mfe, na-aza aha Njikwa ekwentị Ma, dịka m gwara gị, anyị ga-achọ ya na ihuenyo ụlọ Huawei iji gbaa ya, lee anya na ngalaba ahụ Igbochi ngwa iji mepụta okwuntughe nnweta nke ga - emecha jiri nweta ngwa ndị anyị họọrọ n'etiti ndị niile anyị rụnyere na ngwaọrụ ahụ.
1 Video: otu esi egbochi WhatsApp na paswọọdụ ịnweta
2 Otu esi eme mkpọchi mkpisiaka na WhatsApp
3 Wayszọ ndị ọzọ igbochi WhatsApp na gam akporo na-enweghị wụnye ngwa
Video: otu esi egbochi WhatsApp na paswọọdụ ịnweta
Otu esi eme mkpọchi mkpisiaka na WhatsApp
N’oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe ike igbachi na unlock kpọghee ekwt WhatsApp iji anyị mkpisiaka. Ha arụ ọrụ na obere oge ma ọ dịla hụ ugbua na ụfọdụ nke betas. Ọ bụ ezie na ugbu a, ọ nweghị gọọmentị ụbọchị maka mmalite ya na gam akporo. Mana nke a apụtaghị na anyị enweghị ike iji usoro a. Ebe ọ bụ na ọ ga-ekwe omume, mana iji ngwa ndị ọzọ, nke dịkwa mfe iji na nke a.
Otu nke kasị mma nhọrọ na nke a bụ App mkpọchi, ọ bụ ezie na e nwere nhọrọ dị iche iche dị na gam akporo nke ayi kwuru okwu bayere ya. Ha niile na-enye anyị ohere iji gbochie ngwa na ekwentị, gụnyere WhatsApp, na mkpịsị aka anyị. Ha na-enye anyị ohere iji ihe mmetụta mkpịsị aka mkpịsị aka ekwentị mee ihe. Na mgbakwunye, ọrụ nke ngwa ahụ dị mfe.
Anyị ga-ebudata ngwa na ekwentị. Mgbe anyị meghere ya, ọ ga-ajụ anyị ka anyị tinye PIN nke anyị ga-eji nweta ya, nke sitere na ebe anyị nwere ike ijikwa ngwa ndị ọzọ. N'ime ngwa anyị hụrụ ndepụta nke ngwa ndị anyị nwere na gam akporo, gụnyere WhatsApp. Anyị kwesịrị tụgharịa mgba ọkụ na nke a pụtara na anyị nwere ike igbochi ya iji akara mkpisiaka mmetụta. Nke a pụtara na mgbe anyị chọrọ ịbanye na ngwa anyị ga-eji ihe mkpịsị aka akara aka. Iji budata mkpọchi App naanị ị pịa njikọ a:
Mkpọchi App: Mkpisiaka dị ka paswọọdụ
N'ezie n'oge na-adịghị enwere ike ime ya na ngwa n'onwe ya. Mana kemgbe WhatsApp enyebeghị ụbọchị maka nke a n'oge a.
Wayszọ ndị ọzọ igbochi WhatsApp na gam akporo na-enweghị wụnye ngwa
Anyị nwere ike ịchọ inwe ike igbochi WhatsApp na ekwentị, iji gbochie onye ọzọ ịnweta ngwa ahụ. Na nke a, anyị nwere ike ịpụ na ntọala ekwentị n'onwe ya. Ọtụtụ ụdị dị iche iche na gam akporo na-enye anyị ọrụ iji gbochie ịnweta ngwa, nke mere na ohere ha nwere oke. Iji nweta ha, ị ga-ejiriri PIN, paswọọdụ ma ọ bụ ụzọ nchekwa ndị ọzọ, nke dịgasị iche site n'otu akara gaa na nke ọzọ.
Dịka anyị kwurula, ọtụtụ ụdị na gam akporo na-enye nhọrọ a, nke anyị ga-agbaso usoro ole na ole. Anyị na-agwa gị ihe ị ga - eme n'ihe gbasara ụdị akara ọ bụla.
Mepee ntọala ekwentị
Tinye Advanced Akụkụ ngalaba
Chọta nhọrọ mkpọchi ma zoo ngwa ma tinye ya
Họrọ igbochi usoro iji
Họrọ WhatsApp na ndepụta nke ngwa na ihuenyo
Tinye ngalaba a na-akpọ Nche na nzuzo
Tinye nhọrọ akpọrọ mkpọchi ngwa ma ọ bụ mkpọchi ngwa
Tinye ngalaba nzuzo
Nweta ngalaba a na-akpọ Nzuzo Nzuzo
Mee ngọngọ nhọrọ nhọrọ ngwa ngwa ọ bụla
Họrọ WhatsApp na listi
Tinye ntọala ekwentị
Gaa na ngalaba Nche na mkpisi aka
Tinye nhọrọ a na-akpọ ngọngọ ngwa
Chọta WhatsApp na listi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Esi igbachi WhatsApp site na paswọọdụ
Daalụ nke ukwuu maka ozi ahụ, ọ bụrụla ezigbo enyemaka nye m.
Ọ bụrụ na echefuru m paswọọdụ, olee otu m ga-esi nwetaghachi ya, biko nyere aka
[APK] Download Sony Music Walkman for any Android terminal (Old version)
The Honor 20 ga-abata n'oge na-adịghị anya n'ahịa